ကိုယ်ဝန်တားစားဆေး အမေး-အဖြေ ၂၅ ခု (ပထမပိုင်း) - Myanmarload
ကိုယ်ဝန်တားစားဆေး အမေး-အဖြေ ၂၅ ခု (ပထမပိုင်း)
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ် က 23:29 April 04, 2017
ကျွန်တော်ဇနီးက အသက်၂၃နှစ်ပါ။ ၂၈ လုံးပါ Ok သားဆက်ခြားဆေးကို မနက်တိုင်းပုံမှန်သောက်ပါတယ်။ အဖြူရောင် ၂၁ ကုန်ပါပြီ။ အညိုရောင်ဆေးဒီနေ့စသောက်နေပါပြီဆရာ။ 14.3.2016 ရက်နေ့ တားဆေးစသောက်တာပါ။ ရာသီ လာမည့်ရက် 23.3.2016 ရက်နေ့ပါ။ ခုလထိ ရာသီမလာဘူးဆရာ။ တားဆေးကြောင့်မလာတာလား သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ဆီးစစ်ပြီးပြီဆရာ ကိုယ်ဝန်မရှိဘူးဆရာ။ ရာသီသွေးမဆင်းတာ ဘယ်ကြောင့်လဲဆရာ။ ဘာဆေးသောက်သင့်သလဲ ညွှန်ကြားပေးပါဆရာ။
1.ကိုယ်ဝန်တား ဟော်မုန်းပါ စားဆေးဆိုတာဘာလဲ။
ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ လုပ်ထားတဲ့ (အီစထိုဂျင်) နဲ့ (ပရိုဂျက်စတင်) ဟော်မုန်း (အတု) တွေ ပါတယ်။ ဒီဆေးတွေ သွေးထဲ ဝင်လာရင် ကိုယ်ဝန်မရစေဘူး။ လစဉ်ထွက်နေကျ မ-မျိုးဥထွက်လာမှာကို တားဆီးပေးမယ်။ သားအိမ်ဝမှာ ရှိနေတဲ့ အကျိအချွဲကို စေးပျစ်စေလို့ သုက်ပိုးဝင်လာမှာကို တားပေးတယ်။ ဖို-မ နှစ်ခု မတွေ့စေနိုင်ဘူး။ သားအိမ်အတွင်း နံရံကို ပါးလွှာစေလို့ ဖို-မ တွေ့ကြအုံးတော့ လာမတွယ်စေနိုင်ဘူး။
2. ကိုယ်ဝန်တား ဟော်မုန်းပါ စားဆေးသောက်နေရင် တခြားတားနည်း လိုသေးသလား။
ဒီ တားဆေးတွေ၊ Implant အရေပြားအောက်ထားရတဲ့ တားဆေးချောင်းနဲ့ Depo-Provera ၃ လခံ ထိုးဆေးတွေဟာ ရာသီစလာတဲ့နေ့ကနေ စသုံးရင် ချက်ချင်း ထိရောက်တယ်။ အမှန်က ၇ ရက်နေမှ အသေအခြာ ထိရောက်ပါတယ်။ အဲဒီ ၇ ရက်အတွင်း အတူနေပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်မရဘို့ % အတော်ကြီး များတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုလိုမယ်မယ် ဒီ ၇ ရက်အတွက် တခြားနည်းတခုခုသုံးရင် ရာနှုန်းပြည့် စိတ်ချရမယ်။
3. ကိုယ်ဝန်တား ဟော်မုန်းပါ စားဆေးသောက်တာ ရပ်လိုက်တဲ့နောက် ဘယ်လောက်ကြာမှ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သလဲ။
တချို့မှာ စောင့်စရာမလိုပါ။ တချို့က ခဏစောင့်ရမယ်။ ရာသီလာတာ ပုံမှန်ဖြစ်လာအောင် ထိန်းညှိနေအုံးမယ်။ တချို့ တနှစ်လောက် စောင့်ရနိုင်တယ်။
4. ကိုယ်ဝန်တား ဟော်မုန်းပါ စားဆေး ရပ်လိုက်ပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်မရသေးပါလား။
ဆေးရပ်လိုက်ပေမဲ့ ဆေးသတ္တိကျန်နေသေးအုံးမယ်။ ပျမ်းမျှ ၂-၃ လ ကြာ စောင့်ရတတ်တယ်။ Depo-Provera are ဆေးထိုးတားသူဆိုရင် ၆-၁၂ လ စောင့်ရတတ်တယ်။ ရာသီမလာတာလဲ ရှိနိုင်တယ်။
5. ကျမ ရာသီ ပြန်မလာပါလား။
Progestin-only pills ဟော်မုန်း တမျိုးထဲပါဆေးမျိုး သောက်ရင် ရာသီမလာတာဖြစ်သူ များတတ်တယ်။ မသေခြာရင် ကိုယ်ဝန် ရှိ-မရှိ ဆီးစစ်ပါ။ Depo-Provera ထိုးသူတွေ ရာသီမလာတတ်တာ များတယ်။ လူဝလာတတ်တယ်။ ရင်သားနာတတ်တယ်။ ခေါင်းနဲနဲ ကိုက်မယ်။
6. ဆေးသောက်ဘို့ မေ့သွားရင် ဘာလုပ်မလဲ။
ဆေးကို ရက်သာမက နေ့စဉ်အချိန်လဲတိကျနိုင်လေကောင်းလေဖြစ်တယ်။ နာရီပိုင်းနောက်ကျရင် မကာကွယ်နိုင်တာတော့ မဟုတ်ပါ။ ဟော်မုန်း အတက်အကျဆိုတာ မှန်နေရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ မေ့ရင် သတိရတာနဲ့ သောက်ပါ။ တရက်မေ့ရင် မေ့ခဲ့တဲ့ဆေးပါသောက်လိုက်ပါ။ ဆိုလိုတာက ၂ လုံးကို တရက်ထဲ သောက်ရမှာပါ။ ၂ ရက်အထိမေ့ရင် ၃ လုံး မသောက်ပါနဲ့။ အဲလိုသာဖြစ်သွားရင် လိုလိုမယ်မယ် နောက် ၇ ရက်တွက် တခြားကာကွယ်နည်းတခုခုပါသုံးပါ။
7. ဆေးသောက်ပြီး အန်ရင် ထိရောက်မလား။
ဆေးသောက်ပြီး ၂ နာရီအတွင်း အန်ရင် ဆေးတလုံး ထပ်သောက်ရမယ်။
8. ကြားရက် သွေးဆင်းနေတယ်။
ကိုယ်ဝန်တား ဟော်မုန်းပါ စားဆေး စသောက်ဘူးသူတွေမှာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒီလိုဖြစ်တာက ဆေးထိရောက်မှု နည်းတဲ့သဘော ဖြစ်တယ်။ အပိုနည်းပါ သုံးဘို့ လိုချင်လိုမယ်။ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ Chlamydia ပိုးဝင်နေတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
9. ကိုယ်ဝန်ရှိနေမှန်း မသိဘဲ ကိုယ်ဝန်တား ဟော်မုန်းပါ စားဆေးသောက်မိရင် ဘာလုပ်ရမလဲ။
ဒီဆေးတွေကနေ ကိုယ်ဝန် နဲ့ အထဲကကလေးကို ဘယ်လို သက်ရောက်တယ်ဆိုတာ ပြည့်စုံတဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါ။ သိတာနဲ့ ဆေးသောက်တာ ရပ်လိုက်ပါ။
10. ဘယ်လို အမျိုးသမီးတွေ ဒီဆေးမျိုး မသောက်သင့်သလဲ။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေသူ။ ကလေးနို့တိုက်နေသူ။ ဒါမှမဟုတ် ကလေး ၆ လထက်ငယ်ပြီး နို့တိုက်နေသူ။ ဘာလို့မှန်းမသိဘဲ သွေးဆင်းနေသူ။ အသည်းရောဂါ လောလောလတ်လတ် ရှိနေသူ။ အသက် ၃၅ နှစ် ကျော်လာသူ။ နှလုံး (စထုပ်ခ်) ဖြစ်ဘူးသူ။ သွေးတိုးရှိနေသူ။ သွေးမခဲရောဂါရှိသူ။ ဆီးချိုရှိသူ။ ရင်သား-ကင်ဆာရှိသူ။ (မိုင်ဂရင်း) ခေါင်းမူး-ခေါင်းကိုက်ရောဂါရှိသူ။
11. ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ။
ရာသီမလာဘဲနေ၊ စိုးရိမ်စိတ်၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်၊ စားချင်စိတ်ပြောင်းလဲ၊ သွေးကြောထဲ သွေးခဲတာဖြစ်နိုင်တယ်။ အရိုးအားနည်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျနိုင်တယ်။ ခေါင်းမူး၊ သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်၊ မျိုးဥအိမ်ကြီး၊ သည်းခြေကျောက်။ (ရှားပါး)၊ ခေါင်းကိုက်မယ်။ နှလုံး (အတက်ခ်) ဖြစ်နိုင်တယ်။ သွေးဖိအားတက်နိုင်တယ်။ ဝက်ခြံ တိုးနိုင်-လျှော့နိုင်တယ်။ မျက်နှာနဲ့ ကိုယ်မွှေ များ-နည်း၊ အသားဝါ၊ (ရှားပါး)၊ အလဲ အကျိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ (ရှားပါး)၊ ရာသီလာရက်များ၊ လိင်စိတ် နည်းနိုင်တယ်။ ပျို့-အန်ချင်မယ်။ ဗိုက်အောက်ပိုင်းနာ၊ သားအိမ်ဝ ကင်ဆာ၊ ဆံပင်ကျွတ်၊ အရေပြား အနီပြင်ထွက်၊ အမဲကွက်ထွက်၊ ကြားရက်သွေးဆင်း၊ (စထုပ်ခ်) ဖြစ်နိုင်တယ်။ ရင်သားနာ၊ အဖြူဆင်း၊ မွေးလမ်းပိုးဝင်နိုင်တယ်။ လူဝလာမယ်။
12. လူဘယ်လောက် ပိုဝတတ်သလဲ။
တယောက်နဲ့တယောက်တော့ မတူဘူး။ စားချင်စိတ်ပိုလာလို့ နဲ့ အဆီပိုစုလာလို့ ဝလာတာဖြစ်တယ်။ Depo-Provera ဆေးထိုးသူတွေ ပဌမနှစ်ကုန်မှာ 5.4 ပေါင်တိုးပြီး ဒုတိယနှစ်ကုန်မှာ 8.1 ပေါင်တိုးတယ်။ အဲလိုလူတွေ ၂ နှစ်ထက်ပို မထိုးသင့်ပါ။
13. ကိုယ်ဝန်တား ဟော်မုန်းပါ စားဆေးကို ၁ဝ နှစ်ကြာသောက်ရင် အန္တရာယ်ရှိသလား။ ဘယ်နှစ်နှစ်အထိ သောက်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်ချက် ရှိသလား။
14. ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်သလဲ။
ရာသီဆင်းနည်းမယ်။ ရာသီလာတုံး ဗိုက်နာတာ သက်သာမယ်။ တင်ပါးဆုံတွင်း အင်္ဂါတွေရောင်တာ နည်းတယ်။ သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်တာ နည်းတယ်။ ရင်သား အကျိတ်ဖြစ်တာနည်းတယ်။ မ-မျိုးဥအိမ် အကျိတ်ဖြစ်တာ နည်းမယ်။ ရာသီမလာခင် ဖြစ်တတ်တာတွေ အဖြစ်နည်းမယ်။ Osteoporosis အရိုးရောဂါဖြစ်တာ နည်းမယ်။ ကိုယ်မွှေးပေါက်တာ နည်းမယ်။ ဗဂျိုင်းနား ခြောက်တာ နည်းမယ်။